Dowladda Federalka oo ciidan gaar ah ku wareejisay amniga magaalada Xiraale – Somali Top News
Dowladda Federalka oo ciidan gaar ah ku wareejisay amniga magaalada Xiraale
July 19, 2019 Somali Top News	0 Comments
Dowlada Faderaalka Soomaaliya ayaa Masuuliyada Amni ee Xeraale u saartay Ciidamo ka tirsan Qaybta 21 aad ee Ciidanka Xoogga Dalka kuwaas oo maanta si rasmi ah Amni Xaqiijinta ah uga bilaabey Gudaha Magaaladaasi.
Taliska Qaybta 21 aad ee Ciidanka Xoogga dalka iyo Masuuliyiin ka tirsan Wasaaradda Gaashaandhiga Soomaaliya ayaa ciidankaan ku wereejiya amaanka Magaaladda Xeraale ee waqooyiga Gobolaka Galgaduud.
Taliyaha Qaybta 21aad Gen. yuusuf “Kaanti” ayaa Saraakiisha Ciidankan kula dardaarmey in ay muujiyaan howl karnimo iyo masuuliyad dheeri ah maadaama dowladu u xilsaartay masuuliyadan balaaran sida uu sheegey.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa dhowaan bulshada reer Xeraale u Balan Qaadey in dowladu qaadatey Masuuliyada Sugida Amniga Xeraale iyaga oo Taasi badalkeeda Odayaasha Xeraale ay Dowladda ku wareejiyeen Maleeshiyaad deegaanka ah iyo Gaadiid dagaal.
Xeraale waxaa horay ugu sugnaa Maleeshiyo beeleed deegaanka ah, waxaana dhawaan loo diiwaan galiyay in ay ka mid noqdaan Ciidanka Xoogga dalka,waxaa lagu wadaa in ay ka mid noqdaan ciidamado wasaaradda Gaashaandhiga Soomaaliya ay sheegtay in dhawaan tababar looga furidoono Xeradda 21 aad ee Ciidanka Xoogga dalka.
← Puntland oo si adag kaga hor timid guddigii Madaxweyne Farmaajo u magacaabay wadahallada
The global war on terror continues in Somalia →
Ganacsade lagu toogtay Suuqa Xamar Weyne